Iindaba zeGolide-Funda ukuRhweba
Amanqanaba okuchasana okuPhambili: i-$ 1,900, i-$ 1,950, i-$ 2000Amanqanaba eNkxaso aPhambili: i-$ 1,750, i-$ 1, i-700, i-$ 1,650 yegolide (XAUUSD) Ixesha elide leMgangatho: I-BullishGold (XAUUSD) isendleleni ephezulu njengoko iphinda iqalise ngokutsha. Ixabiso legolide liphula ukuchasana kwi-1,830 yeedola kwaye liqalise kwakhona phezulu. Ukusukela nge-31 kaDisemba, abathengi bebesenza iinzame ezingxamisekileyo zokuphelisa ukuxhathisa. NgoJanuwari 3, […]
Amanqanaba okuchasana okuPhambili: i-$ 1,900, i-$ 1,950, i-$ 2000Amanqanaba eNkxaso aPhambili: i-$ 1,750, i-$ 1, i-700, i-$ 1,650 yeGolide (XAUUSD) Ixesha elide i-Trend: I-BearishGold (XAUUSD) ikwi-downtrend njengoko imarike ifikelela kummandla ogqithisiweyo. Ukulungiswa okuphezulu kupheliswe kwi-1,830 yeedola. Uxinzelelo lokuthengisa lwaqala kwakhona emva kwemizamo emibini engaphumelelanga yokuphula i-$ 1,830 yokuchasana. Njengoko ixabiso lehla ngaphantsi kwe-avareji ehambayo, i-downtrend [...]
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 31, 2021
Amanqanaba okuchasana okuPhambili: i-$ 1,900, i-$ 1,950, i-$ 2000Amanqanaba eNkxaso aPhambili: i-$ 1,750, i-$ 1, i-700, i-$ 1,650 yeGolide (XAUUSD) Ixesha elide iTrend: Ixabiso leBullishGold's (XAUUSD) lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo njengoko zijongene nokugatywa kwe-overbo. Ngoku, imakethi yophukile ngaphezu kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukunyuka okuthe kratya kwamaxabiso. Xa sijonga umva, i-downtrend yangaphambili iye yapheliswa […]
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 24, 2021
Amanqanaba okuchasana okuPhambili: i-$ 1,900, i-$ 1,950, i-$ 2000Amanqanaba eNkxaso aPhambili: i-$ 1,750, i-$ 1, i-700, i-$ 1,650 yeGolide (XAUUSD) Ixesha elide lexesha elide: ixabiso le-BullishGold's (XAUUSD) lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo kodwa zijongene nokugatywa kwe-1,800 kwi-$. Imarike kufuneka inyuke njengoko amaxabiso engaphezulu komndilili ohambahambayo. Iinkunzi kusafuneka zigcine ixabiso lingaphezulu kwemiyinge ehambayo. Ukusukela ngoJulayi, […]
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 17, 2021
Amanqanaba okuchasana okuPhambili: i-$ 1,900, i-$ 1,950, i-$ 2000Amanqanaba eNkxaso ePhambili: i-$ 1,750, i-$ 1, i-700, i-$ 1,650 yegolide (XAUUSD) Ixesha elide leMgangatho: ixabiso le-BullishGold's (XAUUSD) liphule ngaphezu kwee-avareji ezihambayo. I-uptrend iya kuphinda iqalise ukuba isantya se-bullish sigcinwa. Emva kokuchithwa kwe-23 kaNovemba, ixabiso leGolide lidibanise ngaphezu kwenkxaso ye-1,760 yeedola. Nge-15 kaDisemba, ixabiso […]
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 10, 2021
Amanqanaba okuchasana okuPhambili: i-$ 1,900, i-$ 1,950, i-$ 2000Amanqanaba eNkxaso aPhambili: i-$ 1,750, i-$ 1, i-700, i-$ 1,650 yeGolide (XAUUSD) Ixesha elide: I-BearishGold (XAUUSD) idibanise ngaphezu kwenqanaba le-bearish kwi-1761 ye-december ifikelele kwi-december ye-2. ukudinwa. Igolide iwele kwindawo ethengiswe kakhulu kwimarike. Abathengi banokuvela banyuse amaxabiso phezulu. Ngaphandle koko, […]
Amanqanaba okuchasana okuPhambili: i-$ 1,900, i-$ 1,950, i-$ 2000Amanqanaba eNkxaso ePhambili: i-$ 1,750, i-$ 1, i-700, i-$ 1,650 yegolide (XAUUSD) Ixesha elide leMgangatho: I-BearishGold (XAUUSD) ikwinqanaba elihlayo njengoko ixabiso lentengo liphantsi kwee-avareji ezihambayo. Iintshukumo ezithe kratya eziya ezantsi zilindeleke njengoko kuhla kwamaxabiso ngaphantsi kwemiyinge ehambayo. Igolide iwile kwinqanaba eliphantsi le-1762 yeedola elingaphambili […]
Amanqanaba okuchasana okuPhambili: i-$ 1,900, i-$ 1,950, i-$ 2000Amanqanaba eNkxaso ePhambili: i-$ 1,750, i-$ 1, i-700, i-$ 1,650 yegolide (XAUUSD) Ixesha elide leMzila: I-BearishGold (XAUUSD) iphantsi. Ngomhla we-16 kaNovemba, i-XAUUSD yadibana ne-$ 1,877 ephezulu. Abathengi abakwazanga ukugcina amandla e-bullish njengoko imarike ifikelele kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. Igolide yaliwe ukusuka kwindawo ephezulu yamva nje njengentengiso […]
NgoLwesihlanu, Novemba 19, 2021
Amanqanaba okuchasana okuPhambili: i-$ 1,900, i-$ 1,950, i-$ 2000Amanqanaba eNkxaso aPhambili: i-$ 1,750, i-$ 1, i-700, i-$ 1,650 yegolide (XAUUSD) Ixesha elide leMgangatho: I-BullishGold (XAUUSD) ikwi-uptrend. Imarike iyenyuka njengoko imivalo yexabiso ingaphezulu kwemiyinge ehambayo. I-uptrend yangoku ibambelele kwi-$ 1,877 ukususela ngoNovemba 16. Ukunyuka okuphezulu kuya kuphinda kuqalise ukuba ukuchasana kwangoku kuphulwa. […]
Ukuhlaziywa kokugqibela: Novemba 14th, 2019